Kondoomaadyo Iibka iyo Ijaarka gudaha Calpica Itacumbú, Artigas
Guri-is-kaashatada, oo sida caadiga loo gaabiyo kontoroolka, waa nooc ka mid ah guryaha kirada ah ee loo qaybiyo dhowr unug oo mid walbaa gooni u leeyahay, kuna hareereysan meelaha ay wadaagaan. Guri-is-kaashatada guryaha ayaa badanaa loo dhisaa sida guryaha dabaqyada ah, laakiin waxaa soo kordhay tirada "guryaha is-kaashatada leh ee la dejiyay", kuwaas oo u muuqda guryaha hal qoys ah laakiin ay deyrarka, bannaanka dhismaha, iyo wadooyinka ay si wada-jir ah u leeyihiin oo ay si wada jir ah u dayactirayaan a ururka bulshada. Si ka duwan guryaha guryaha, oo ay kireeyaan kiraystayaasha, guryaha guryaha is-kaashatada ayaa iska leh. Intaa waxaa sii dheer, milkiilayaasha qaybaha shaqsiyaadka sidoo kale waxay si wada jir ah u leeyihiin aagagga guud ee hantida, sida hoolka jiifka, lugeynta, qolalka dharka lagu dhaqo, iwm.; iyo sidoo kale adeegyada guud iyo adeegyada, sida nidaamka HVAC, wiishash-wixiyeyaasha, iyo wixii la mid ah. Meelo badan oo laga dukaameysto ayaa ah is-maamul warshadeed oo shaqsiyaadka tafaariiqda iyo xafiisyada xafiisyada ay leeyihiin ganacsiyada ay leeyihiin halka meelaha caanka ah ee suuqyada ay iska kaashanayaan dhammaan shirkadaha ganacsiga ee leh goobaha shaqsiyaadka.